बिहेपछि श्वेता र विजयन्द्रको पुरा परिवारबिच पहिलो भेट, श्रीमानसँग रोमान्टिक बन्दै नाचिन् श्वेता – Dainik Sangalo
बिहेपछि श्वेता र विजयन्द्रको पुरा परिवारबिच पहिलो भेट, श्रीमानसँग रोमान्टिक बन्दै नाचिन् श्वेता
December 9, 2020 2435
काठमाडौँ । नायिका श्वेता खड्काले मंसिर २२ गतेको लगनमा धुमधामले बिबाह गरेकी छिन् । प्रेमी विजयन्द्रसिंह रावतसँग गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा श्वेताले विवाह गरेकी श्वेताले अहिले आफ्नो विबाहपछि जीवन सुरु गरेकी छिन् ।
सिमित साथीभाई र आफन्त माझ धुमधामले विबाह गरेकी श्वेताले विबाह गरेर घरमा पुगेपछि विजयेन्द्रको परिवारसँग खुशी देखिएकी छिन् । हिन्दू परम्परा अनुसार बिबाह गरेर विजयेन्द्रको घरमा गएकी श्वेताका पति विजयन्द्र सिंह रावत घनगडीबासी हुन् ।
उनी घरका कान्छा छोरा हुन् । घरमा आमा बुवा सहित एक दाजु रहेको श्वेताले ओएस नेपालसँगको कुराकानीमा जानकारी गराइन् ।
व्यापारिक घरनाका विजयन्द्र र नायिका, निर्मात्री, उद्यमी र समाजसेवी श्वेता विगत केही समयदेखि रिलेसनसिपमा थिए । पढाई सकेर विज्नेश सुरु गर्ने योजनामा रहेका विजयेन्द्रको घरमा श्वेता पुगेपछि देखिएको यो रमाइलो र खुशीको माहोल भिडियोमा हेर्नुहोस्
आँचल शर्माले राखिन् म्यानेजर, को हुन् सुन्दरी आँचलको सबै कामको जिम्मेवारी संहाल्ने भाग्यमानी ?
काठमाडौं । लोकप्रिय नायिका आँचल शर्माले म्यानेजर नियुक्त गरेकी छिन् । पछिल्लो समय उनको ब्यस्तता बढेसँगै आँचलले सामाजिक सञ्जाल चलाउन, निर्मातारनिर्देशकसँग फिल्मको विषयमा कुराकानी गर्न, पारिश्रमिक मिलाउन, समय व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि उनीहरुले म्यानेजर नियुक्ति गरेकी हुन् । वैबाहिक बन्धनमा बाँधिएसँगै घरबारमा ब्यस्त भएर कैयौँ नायिकाहरुले चलचित्र क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका नजिरहरुका बिचमा आँचलले भने विबहपछि झनै जम्ने संकेत गरेकी छिन् ।
बैबाहिक जीवनमा बाँधिनुभन्दा अगाडि म्यानेजरले गर्ने काम समेत आफैंले सम्हाल्दै आएकी अभिनेत्री आँचल शर्माले आफ्नो सहयोगका लागि म्यानेजर राखेसँगै आफ्नो काममा सहज हुने आँचलले बताएकी छिन् । अहिले आँचललाई अफर हुने फिल्मदेखि म्यूजिक भिडियोमा आउने सबै अफर र एडको काममा समेत तिनै म्यानेजरले कुराकानी र समय मिलाउने गरेको आँचलले बताइन् । आफैं पनि फिल्म निर्माण गर्न लागेकी आँचलकी म्यानेजर महिला भए पनि उनको परिचय भने खुलाइएको छैन ।
प्रेमीसँग अमेरिकामा लामो समयदेखि रोमान्स गरिरहेकी वर्षा शिवाकोटीले विबाहबारे मुख खोलीन्
काठमाडौं- नायिका वर्षा सिवाकोटीले २ वर्षभित्र बिहे गर्ने बताएकी छन् । विगत १ वर्षदेखि सविनजंग थापासँग प्रेममा रहेकी वर्षाले २ वर्षभित्र बिहे गर्ने योजना रहेको बताएकी हुन् ।
सविन र वर्षाको चिनजान आफन्तहरुको माध्यमबाट भएपछि कुराकानी गर्दै आएका उनीहरुको प्रेम त्यसपछि झांगिदै गएको हो । सविन अमेरिकामा नै रहदै आएका छन् ।
अमेरिकामा एक महिना बिताउँदा सविन र वर्षाले एक अर्काको आफन्तलाई समेत परिचित गराएका थिए ।
वर्षाले बिहे पछि पनि नेपाली चलचित्रबाट टाढा नरहने बताएकी छन् । सविन आफ्नो कलाकारिता यात्राबाट खुशी रहेको वर्षा बताउछिन् । वर्षा भन्छिन सविनले मलाइ सधै काम गर्न हौसला र प्रेरणा दिन्छन् ।
Prevधमाधम चिनियाँ मोडेलमा हुँदै नेपालको विकास, चीनले दियो राम्रो साथ,आयो अत्यन्तै खुशीको खबर !!!
Nextभक्तपुरमा कार टु’x क्रा हुँदा बि’x तेकी महिला अर्कै ड्राईभरकी पत्नी रहिछन्,ईञ्जिनियरले लगेका थिए (भिडियो हेर्नुहोस्)
आईसीयूबाट डाक्टरको अपिल- बाँच्न गा’ह्रो छ, सेल्फ लकडाउनमा बस्नुस्, सरकारले लकडाउन गर्दा धेरै ढिला हुन्छ
नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, लकडाउन गर्ने तयारी, २ सय ३५ जना नागरिक निगरानीमा
बिहेको केहि दिनमा श्रीमतीले छोडेर गलत निर्णय लिएका कन्चनको अस्पतालमा मृत्यु